Xiaomi သည် Double 11 Shopping Festival မတိုင်မီ နှစ် နာရီ အလို တွင်စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂. ၃၄ ဘီလီယံကျော် ပေးချေ ခဲ့သည် - Pandaily
Nov 11, 2021, 18:44ညနေ 2021/11/11 20:05:44 Pandaily
တရုတ် အီလက်ထရွန်နစ် ကုမ္ပဏီကြီး Xiaomi ဖြန့်ချိDouble 11 Shoppi ငွေပေးချေမှု အစီရင်ခံစာကြာသပတေးနေ့ Wu ပွဲတော် ။ နို ၀ င်ဘာ ၁၁ ရက် 02:00 တွင် Xiaomi Double 11 ၏စုစုပေါင်း ငွေပေးချေမှု သည်ယွမ် ၁၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂. ၃၄ ဘီလီယံ) ကျော် ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၏ ၁၄. ၃ ဘီလီယံ ထက်ကျော်လွန် ခဲ့သည်။
Xiaomi ၏ high-end flagship ထုတ်ကုန်များကို Tmall နှင့် JD.com တွင်ပထမ ၂ နာရီအတွင်း ရောင်းအား သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူကာလ ထက် သုံးဆ ပိုများ ကြောင်း အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။ Snapdragon 888 ပါ၀င္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ flagship စမတ္ဖုန္း ဟာ Tmall နဲ႔ JD.com ရဲ႕ ေရာင္း အား အေကာင္းဆံုး ဆုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Xiaomi MIX FOLD ဟာ Tmall နဲ႕ JD.com တို႕ ရဲ႕ ေရာင္း အား အေကာင္းဆံုး ေခါက္ ဖုန္း ျဖစ္လာပါတယ္။ Xiaomi MIX4ဟာ ယွမ် ၄၀၀၀ ဝန်းကျင် ရှိတဲ့ Android စမတ်ဖုန်း တွေထဲမှာ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Smart TV မွာေတာ့ Xiaomi ဟာ e-commerce ပလက္ ေဖာင္း ႀကီး ႏွစ္ခု ရဲ႕ ေငြေပးေခ် မႈနဲ႔ ေရာင္း အား မွာ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
သတိပြု သင့် သည်မှာ နို ၀ င်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် Double 11 ပရိုမိုး ရှင်း ကာလ ၏ ထင်ရှားသော အချက်မှာ Xiaomi ၏ ထုတ်ကုန် များသည် ကွဲပြားခြားနားသော ဒီဂရီ များ အတွက်အထူး လျှော့စျေး များ ရရှိခဲ့ပြီး Xiaomi 11 ၏ စျေး နှုန်းကို ယွမ် ၁၄၀၀ ဖြင့် လျှော့ချ ခဲ့ပြီး သုံးစွဲ သူများသည် ၂၅ ၉၉ ယွမ် ဖြင့် ၀ ယ် နိုင်သည်။ Xiaomi MIX4ကေတာ့ ၁၆ ၉၉ ယြမ္ ကို တည့္ တည့္ က်သြား ခဲ့ျပီး အခုဆိုရင္ ၃၃ ၉၉ ယြမ္ သာ က်သင့္ ေတာ့မွာ
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi က အနာဂတ် ကို ဦးတည် တဲ့ “Loop Liquidcool Technology” ကို တရားဝင် မိတ်ဆက် လိုက်ပြီး H2 ကို ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ် ဖို့ စီစဉ် နေ ပါတယ်
ထူးျခား တာကေတာ့ Xiaomi ရဲ႕ အရင္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ ေတြအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ပထ မႏွစ္ ၀က္ မွာ ယြမ္ ၃၀၀၀ နဲ႔ အထက္ နဲ႔ ျပည္ပ မွာ ယူ႐ို ၃၀၀ နဲ႔ အထက္ တန္ဖိုး ျမင့္ စမတ္ဖုန္း ေတြကို ကမၻာ တ၀ ွမ္း မွာ ၁၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ ႏိုင္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တစ္ ႏွစ္လံုး ရဲ႕ စုစုေပါင္း ေရာင္း အား ထက္ ေက်ာ္လြန္ သြား ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။